Teo ny nofonkena mitam-pihavanana nanomezany omby ireo mpitandro ny filaminana nandray anjara tamin’ny Matso. Teo ny loza voasoroka nanoloana ny omby nifatotra ho fanomezana ho an’ny Tafika. Fa teo amin’ny fiseho dia niavaka i Naina Andriantsitohaina tamin’ny nisalorany ny samboady maha Ben’ny tanàna. Tany amin’ny andilany havana no nisy ny vona mivolom-bolamena tamin’ilay samboady nentiny. Kisendrasendra sa tsy fahalalana sa sanatriavina niniana natao mba hiavaka ? Nitaza-maso fotsiny ireo mpiara-miasa akaiky aminy, nefa andro sy lanonan-dehibe no hisehoana ? Ho an’ny Ben’ny tanàna mantsy dia eo ambalahana ary mivona ao ankavia ny samboady, amin’ny loko telon’ny sainam-pirenena. Ny andininy faha- 49 amin’ny lalàna 2014-020 no mamariparitra io samboadin’ny Ben’ny tanàna io.